ANKOLAFY RAVALOMANANA : TONGA NITSIDIKA AN-DRAMATOA RAVALOMANANA LALAO – MyDago.com aime Madagascar
Tonga nitsidika an-dRamatoa Ravalomanana Lalao tetsy amin’ny trano fonenany etsy Faravohitra io tolakandrao io ireo delegasiona avy amin’ny Ankolafy Ravalomanana. Ny lehiben’ny delegasiona ny Ankolafy sady filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy no nitarika azy ireo, nahitana ihany koa ny filoha lefitry ny Cst Razafimanantsoa Hanitra, ny Praiminisitra Lefitra misahana ny toe-karena sy ny Indostria Botozaza Pierrot, ny ministry ny varotra Ramalason Olga, ny ministry ny fiompiana Randriamandranto Ihanta, Andriamatoa Benja Andriamihanta avy aoamin’ny Cenit, Andriamatoa Guy Rivo Andrianarisoa, ny Ct Ravelonanosy Mamy Tiana, Cst Rakotonirina Manandafy, Cst Rakotovazaha Olivier, Ct Satrobory. Nambaran’ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy izay nitondra ny fitenenana fa faly izahay Ankolafy Ravalomanana mandray anao tonga eto an-tanindrazana. Fantatra hoy izy fa hitsabo ny reninao izay tsy salama no hahatongavanao. Mirary izahay hoy Mamy fahasalamana ho azy ary izao dianao izao dia tsymisy resaka politika. Miray izahay ny ahazoana andro tsara mandritra izao dianao izao. Mitsodrano anao izahay Ankolafy Ravalomanana hoy Mamy ahazoanao « séjour » nefa rehefa misy fandaminana dia tonga izahay. Faly izahay mifankahita aminareo izay tonga avy any Afrika Atsimo. Aza misalasa fa eo foana izay Izany vehivavy izany hoy Mamy tsy sanatria veryzo fa manana zo afaka mody eto Madagasikara. Namaly izany teny izany kosa Ramatoa Lalao Ravalomanana. Faly aho hoy izy mahita ny vahoaka Malagasy hoe iray tanindrazana isika mianakavy. Misaotra an’Andriamanitra arymisaotra anareo fa nanampy ahy ianareo tamin’ny reniko. Efa nitsidika azy tany aho hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana fa tsy mahafantatra ahy izy. Apetraka eo am-pelantanan’Andriamanitra ny fahalasalamany. Mandritra ny hipetrahako eto dia manana fotoana aho ankanesako eny amin’ny Hopitaly. Ataoko tonga any amin’ny ray amandreny, ny filoha Ravalomanana Marc hoy izy izao ataonareo izao satria mahita ahy ianareo dia mahita azy.
KABARIN-DRAMATOA LALAO RAVALOMANANA
Auteur Solo Razafy*Publié le 12 mars 2013 12 mars 2013 Catégories Politique
8 pensées sur “ANKOLAFY RAVALOMANANA : TONGA NITSIDIKA AN-DRAMATOA RAVALOMANANA LALAO”
priscilia Rakotomalala dit :
Tongasoa Ramatoa Lalao RAVALOMANANA, misaotra ny Tompo izay be fitiavana sy famindram-po fa namaly ny vavaka Izy, Hotahiana anie Ianao ry Neny raha miditra sy mivoaka! Mitrotro am-bavaka ho an’i Bebe Razay ho sitrana soa aman-tsara!
Tonga soa antanindrazana tompoko vavy hajaina.
Fa ho antsika mpanohina ny filoha sy ny vadiny:
– Tsy ao @ io toerana io ve moa no toa hoe nidirany miaramila frantsay vao tsy ela loatra izay????
Aleo mailo fa tsy hatokisana ny frantsay sy malagasy mpamadika e!
Sao maniry toa hanana ny « micro » sy fakana sary isankarazany, fitaovana fitsikilovana hananandry zareo frantsay talenta ary sao adinon’ireo CT,CST sy asa inona daholo koa ireto sady miasa miaraka @ domelina no manohina ny filoha voafidim-bahoaka??????
13 mars 2013 à 8 h 04 min
Tokony tsy hihambahamba hakao @ MAGRO Ramatoa Lalao Ravalomanana ary koa mamtraka tsara ny firaisakiana. Enga anie ka tsy i Antriamanitra no antsoitsoiny fa ilay firaisakiana eo @ samy mpanohana ny filoha Ravalomanana aloha. ary asa raha mety an’ireo mpanohatra an’i Rajoelina. Hanome hery ny mpitolona sy hametraka @ toerany ireo mpitarika izay manana eritreritra hafa.
Indro aho momba anao ;mandrapahatonga ny fahataperan ‘nizao to ntolo izao;Izay miantso ny anaranii; Jehovah no hovonjena
Malala B Fika dit :
Ra tsy hiambahamba ho ao amin’ny MAGRO tokoa izy dia tsy hiambahamba ny hamerina azy any Afrika atsimo ny FAT satria tsy tao anatin’ny nifanarahana mihintsy izany hoe: tsy tokony hiteraka korontana ny fahatongavany eto!!
Ilay izy ko anie tsy mitsahatra ny mamoaka vaova momba azy avokoa ny haino aman-jery nefa izany dia hanitikitika tokoa ny Tetezamitatra, izay zao no hametraka olana fa tsy ny fankanesany ety amin’ny magro.
Justino dit :
18 mars 2013 à 14 h 13 min
Amiko aloha tsy tokony andalo na dia indray mandeha monja eny amin’ny magro izy ary tsy tokony hiamafy toy izao ny resabe momba azy satria ra vao misy fitombon’ny herin’ny mpanohitra dia hiemotra indray ireo mpamatsy vola mba nanaiky hanome tanana amin’ny fifidianana!!!!!!!
Zay mangina volamen’eee
Précédent Article précédent : CIRGN : MANAIKY NY ARTIKLA 20, TSY MIRAHARAHA NY ANDININY 45
Suivant Article suivant : Mbola ho avy ny maraina ry Malagasy a !